रोनाल्डो मात्रै हैनन् ‘सेयर’ बजार हल्लाउने सेलिब्रेटी, यी सेलिब्रेटीका कारण पनि गिरेको थियो सेयर बजार « Bizkhabar Online
रोनाल्डो मात्रै हैनन् ‘सेयर’ बजार हल्लाउने सेलिब्रेटी, यी सेलिब्रेटीका कारण पनि गिरेको थियो सेयर बजार
24 June, 2021 8:28 am
काठमाडौं । केही दिन अघिमात्र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले एक प्रेस सम्मेलनमा कोका कोलाको बोतललाई आफ्नो नजिकबाट हटाएसँगै कोका कोलाले स्टक मार्केटमा ठूलो क्षति बेहोर्यो । पोर्चुगलका स्टार फुटबलर र पाँच पटकका ‘बेलुन डि ओर’ विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डोले युरो २०२० मा हंगेरीबिरुद्ध उनको खेल अगाडि पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न आएका थिए ।
उनले कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै, पहिलो कुरा दुई कोका कोलाका बोतलहरू आफ्नो नजिकबाट हटाएर पानीको बोतल उठाए र पानी पिउन सल्लाह दिए । यसकारणले कोकाकोलाको स्टकमा गिरावट आउन थाल्यो र कम्पनीले ४ अर्ब अमेरिकी डलर (नेपाली करीब ५ खर्ब रुपैयाँ २ ) को घाटा बेहोर्यो । स्पेनिश अखबार मार्काका अनुसार युरोपमा शेयर बजार खुलेको बेला कोकाकोलाको १ सेयरको मूल्य ४४.१० अमेरिकी डलर थियो तर छोटो समयमा यो ४३.२२ डलरमा झरेको थियो ।
यो समाचार पहिलोपटक सुन्दा आश्चर्यजनक लाग्न सक्छ, तर यो पहिलो पटक भएको भने होईन । विगतमा, यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, जब सेलिब्रेटीको ट्वीट वा ब्रान्डकोे तस्बिर प्रयोगले कुनै पनि कम्पनीको स्टकमा हलचल मच्चिएको छ ।
क्रिप्टोकरन्सी बजारमा मूल्य उतार चढावहरू सामान्य हुन्छन् । तर पछिल्लो १ वा २ बर्षमा यस्तो बजारमा अनौंठो प्रवृत्ति रहेको छ । जब स्पेस एक्स सीईओ एलन मस्कले क्रिप्टोकरन्सीको बारेमा ट्वीट गरेका छन् । क्रिप्टोको मूल्य या त सीधा आकाश छुन्छ वा भारी ढुंगा झैं डूब्छ । एलोन मस्क, आफ्नै ब्रान्ड भ्यालु र र ५७.२ मिलियन फलोअर्सको साथ ठूला सेलिबे्रटी हुन् ।
मस्क टिवटरमा पहिलो पटक मार्च २०२० मा डगक्वोइनको प्रशंसकको रूपमा देखा परे । उननले फेब्रुअरी २०२१ मा ‘शेरन किंग’ बाट प्रेरित डगक्वोइनको मेमे सेयर गरेसँगै डगक्वोइनका शेयर मूल्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि देखियो । जनवरी २०२१ मा एलन मस्कले आफ्नो ट्विटर प्रोफाइलमा ‘ह्यासट्याग बिटक्वोइन’ लेखेका थिए । ब्लकचेन रिसर्च ल्याबका अनुसार, सातघण्टा भित्र, बिटक्वोइनको मूल्यमा १९ प्रतिशत वृद्धि देखियो । जब एलन मस्कले आफ्नै कम्पनी टेस्लाको स्टकलाई ‘ज्यादै महँगो’ भएको बताए तब कम्पनीले १४ अर्ब डलरको घाटा बेहोरेको थियो ।
फेब्रुअरी २२, २०१८ मा रातको साढे तीन बजेतिर, काइली जेनरले ट्वीट गरिन, “के अरु कसैले स्नैपच्याट खोल्दैन? वा म मात्र यो काम गरिरहेको छु । यो साह्रै दुखको कुरा हो ।’ अर्को दिन, स्न्यापच्याटको सेयर मूल्यमा ७ प्रतिशतको गिरावट आयो । रोयटर्सका अनुसार तत्कालीन बजारको मार्केट भ्यालुमा स्न्यापच्याटले १.५ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति बेहोर्नुपर्यो । यद्यपि त्यस ट्वीटको १ मिनेट पछि काइली जेनरले ‘अझै पनि तपाईंलाई माया गर्छु स्नेप… मेरो पहिलो प्रेम’ भन्दै ट्वीट गरेकि थिइन । तर, स्टकका ‘खेलाडीहरू’ले उनको पहिलो ट्वीटबाट उनको ‘भावना’ पढिसकेका थिए ।
सेप्टेम्बर २१, २०१५मा, अमेरिकी राष्ट्रपति पदकी उम्मेद्वार हिलारी क्लिन्टनले एउटा ट्वीट गरिन । त्यतिबेला जीवन नै जोखिममा पार्ने ‘परजीवी संक्रमणहरू’ रोक्न प्रयोग गरिने ड्रप्रिम नामक औषधिको मूल्य रातारात १४.१. डलरबाट बढाएर ७५० डलर पुर्याइएको थियो । यसबारे आफ्नो ट्वीटरमा न्यु्योर्क टाइम्सको लेख सेयर गर्दै उनले ‘विशेष औषधिको रुपमा रहेको यो औषधिको बजारमा यस तरीकाले मूल्य बढाउनु क्रुर छ । भोलि म यस कार्यको विरुद्ध योजना लिएर बाहिर आउने छु’ भनेर ट्वीट गरिन । अर्को दिन यो औष्धिको उत्पादक नास्दाक बायोटेक इटीएफको सेयर मूल्यमा ५ प्रतिशतको गिरावट आयो । यो कम्पनीका लागि निकै ठूलो क्षति थियो ।
‘सुपरगर्ल’ र म्यूजिक ड्रामा ‘स्मैश’ का स्टार जेरेमी जोर्डनले एकपटक एउटा ट्वीट गरे । उनले ‘चिपटोल’ खाँदा उनलाई फुड प्वाइजन भएको र आफु लगभग ‘मरे’ भन्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै ट्वीट गरे । जसका कारण कम्पनीको सेयर ५.९ प्रतिशतले घट्यो । त्यातिबेला कम्पनीको मार्केट भ्यालु इतिहासमा ५ वर्षकै सबैभन्दा कम स्तरमा पुगेको थियो ।
पूर्व प्रथम अमेरिकी महिला मिशेल ओबामाले फेसन ट्रेंड मात्र नभएर सम्पूर्ण फेसन व्यवसायमै प्रभाव पारिन । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार उनले बराक ओबामाको पहिलो वर्षको कार्यालयमा लगाएका युरोपियन लेबलका लुगा लगाइन । जब उनी सार्वजनिक रूपमा डिजाइनरको कपडामा देखिइन तब ती कपडाको बजार सामूहिक रुपले १६ प्रतिशत वृद्धि भयो ।
नोभेम्बर २००८ देखि र डिसेम्बर २००९ बीचमा मिशेल ओबामाले पहिरेका २९ अमेरिकी फेसज कम्पनीहरूले २.४ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गरेका थिए । अर्कोतर्फ, यस बीचमा मिशेल ओबामाले नलगाएका २७ ब्रान्डको मार्केट भ्यालु ०.२ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो ।
शेयर बजार अपेक्षा, भावना र रणनीतिको स्तम्भमा खडा हुन्छ । यसको सही मूल्यांकन स्टक बजार विज्ञहरूका लागि पनि असम्भव छ । प्रख्यात अमेरिकी एयरोस्पेस व्यवसायी नर्मन रोल्फ अगस्टिन भन्छन कि ‘यदि शेयर बजारका विशेषज्ञहरु विज्ञ नै थिए भने उनीहरु स्टक किन्थे, सल्लाह बेच्दनथेन ।’ त्यसैले सेलिबे्रटीको हरकत र शेयर बजारको ‘मुड स्विङ’ बीच स्पष्ट सम्बन्ध बताउन गाह्रो छ ।
सेलिब्रेटीले सोसल मिडियामार्फत ठूलो संख्याका फलोअरहरुका आधारमा सीधा पहुँचले लगानीकर्ताको भावनालाई प्रभावित पार्दछ । रोनाल्डोको इन्स्टाग्राममा रहेका ३०० मिलियन फलोअरहरू सोच्दछन् कि कोका–कोला नपिउनु रोनाल्डोको फिटनेसको रहस्य हो ? मिशेल ओबामाले युरोपियन लेबल लगाएको देखेर अरुले उनलाई पछ्याउँछन् ?
अरकान्सास युनिभर्सिटी र म्यानचेस्टर बिजनेस स्कूल, लन्डनले १८ देखि २४ वर्षका उपभोक्ताहरूबारे गरेको अध्ययनमा उनीहरूले आफ्नो पहिचान र उपस्थिति बिभिन्न सेब्रिेटीहरुंबाट प्रभावित भएर विकास गरेको पाइएको छ ।
त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि सेलिब्रेटीहरुले फलोअरहरुको भावनालाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यी सबै विज्ञापनभन्दा पनि सेलिब्रेटीको अनुभवसँग सम्बन्धित छ । मानिसहरूलाई थाहा छ कि रोनाल्डोले विगतमा पनि कोकाकोलाको विज्ञापन गरे । तर, यहाँ उनका फ्लोअरहरुले यो विश्वास गर्छन् कि रोनाल्डो वास्तविक जीवनमा कोकजस्तो कुनैे पेयपदार्थ पिउँदैनन् । सेलिब्रेटीको वास्तविक जीवन अनुभवले विज्ञापनको भन्दा धेरै हदसम्म मानिसहरुको भावनालाई असर गर्छ । जसको असर सेयर बजारमा पनि देखिन्छ । –‘दि क्विन्ट’बाट अनुवाद